Shoppingzụ ahịa na Ciudad Del Este bara uru? - Paraguay - 1aviagem.com
Shoppingzụ ahịa na Ciudad Del Este bara uru? - Paraguay
Gara aga post: outburst - Brasilia - Brazil
Nkwupụta na-esote: Nke aka ekpe vidiyo ziri ezi, gịnị kpatara na ọ gaghị enwe ike ịkọwapụta akụkụ ị nọ?
Edebere 3 izu gara aga site Römulo Lucena
Ndị obodo, ebe anyị nọ na iche, m kpebiri ịtụle ụfọdụ foto ochie na n'etiti ha ahụrụ m ụfọdụ njem mbụ m na Paraguay. M wee chee: Ha, ha anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara Paraguay, gịnị mere na agaghị m ekwu ntakịrị ihe gbasara ya? Na nke a bụ nsonaazụ.
Paraguay dị na South America na ókèala Argentina, Brazil na Bolivia. Ọ bụ naanị mba South America na-enweghị ụzọ isi n'oké osimiri.
Ma le, ọ gbara mbọ inwe ntakịrị ọpụpụ n'oké osimiri. N’afọ 1864, Paraguay malitere agha nke ga-agbanwe akụkọ ya kemgbe ebighi ebi. Ọ ga - ewetakwa njikọ na - atụghị anya n'etiti ndị Brazil na ndị Argentine! (Ma ndị Uruguayans). Akụkọ a dum mere na Paraguay War site n'aka Francisco Solano López.
Short, kpọrọ ma ya na afụ ọnụ dị egwu!
Ikwu ntakịrị banyere Solano López. Ọ bụ ọchịagha nke ndị agha na onye isi Paraguay.
Foto si na wikipedia
O nwere nnukwu atụmatụ maka oge ahụ. Achọrọ m ịgbasa ókèala Paraguay, nye mba ahụ ụzọ dị n'oké osimiri ma mee Paraguay ikike ikike akụ na ụba na Latin America. Ọ chọ obere. Iji buru akụkụ nke Ala Brazil (ọkachasị akụkụ nke mejupụtara steeti Mato Grosso do Sul na akụkụ ọzọ nke Paraná), mgbe ndị Brazil niile bụ alaeze dị oke aka. Ah, a choro m mpempe nke Argentina, nke a na-eme n'oge ahụ dịka mba. Iji banye Oke Osimiri Atlantic na otu esi eme nke ahụ? N’uzo kacha mma nke ndi agha mara ka esi eme. Nyere aka. Na nke a, Uruguay. N'oge ọgụ a, Paraguay kwuru na agha ndị Argentina na-egbochi ihe ndị ọ na-eme, Argentina wee buso mba Uruguay agha na mpaghara Rio de la Plata, nke bụ naanị ụzọ isi pụọ na Paraguay nke rutere Ocean. Solano Lopez nyere ndị Uruguayan aka enyemaka agha. N'ihi ya, ọ ga-ahazi ohere ịbanye na mmiri ahụ ma nwee ike ịnweta ụfọdụ ala Brazil na Argentine na usoro ahụ.
Ikekwe ọ bụ ebe ahụ maka ihe ịga nke ọma sitere na 80s sitere.
“Adelaide, dwarf na Paraguay m” - Ndị iro nke Eze
N'agha nke ọdịmma mba enweghị mba dị ọcha.
Cheta nke a: Mba anọ ahụ nwere mmasị na Mpaghara. Na nkenke, onye ọ bụla chọrọ ịmụba ókèala ha. Brazil, Argentina, Uruguay na Paraguay. Paraguay dị ngwa ngwa karịa Brazil n'inye ngwa agha na agha ka Uruguay wee nwee ike ichebe onwe ya n'ọgụ megide Argentina na ọdịnihu megide Brazil. Nsogbu Solano Lopez enweghị ndidi ma na-akpalite ọtụtụ agha n'otu oge. Kedu ihe mechara weta njikọta okpukpu atọ n'etiti Argentina, Brazil na ọbụna Uruguay, nke kwesịrị ịbụ ihe enyemaka, mana mechiri megide Paraguay. Mgbe ahụ, n'ime mmadụ atọ ahụ na-emegide otu Paraguay mechara merie agha ahụ.
Isi ihe di iche
Ndị Brazil na-akọ akụkọ ahụ site na echiche ahụ bụ na Solano Lopez bụ "onye ọchịchị Paraguayan nke nwere ọbara ọbara". Ọ bụ ebumnuche ya mere ka mba ahụ merie na mbibi ala. Ma eziokwu bụ na akụkọ a bụ ihe ọzọ na-egbochi ndị Paraguay karịa eziokwu ahụ n'onwe ya. N'akụkụ Paraguay, Solano Lopez bụ dike nke mba, a sị na ọ bụghị ya, Paraguay gaara adaba ma tinye ya n'ala ndị Argentine ma ọ bụ nke ndị Brazil. Na n'eziokwu ọ bụ naanị otu n'ime mba 4 nwere ikike agha, ọ chọrọ ịbụ ike akụ na ụba, o nwere atụmatụ akọwapụtara. Banyere ndị Uruguay, .. Ọ dị mma, ha na-alụ agha ime obodo na nke mpụga na echiche megide Brazil. Ọgụ maka ehi. Ọ na-enyo na na akachapụlarị ịgba ohu na Uruguay, ebe na Brazil ugbu a. Ya mere, ehi ndị Brazil dị ọnụ ala karịa Uruguayan. Na mgbakwunye, enwere agha obodo n'ime. Akụkụ na-eche maka enyemaka Paraguay na akụkụ nke ọzọ na-eche maka enyemaka Brazil.
Nke bụ eziokwu bụ na n'agbanyeghị ebumnuche ndị mmadụ, inwe ndị agha dị ike ma nwee ala dum (n'echiche nke ịbụworị mba ma ghara ịbụ ndị echiche na-ekewa ma ọ bụ guzobe Republic), atụmatụ ahụ edepụtara kama mmeri na mgbasawanye ókèala wetara. mmekorita dị n'etiti ndị Brazil, ndị Argentines na ndị Uruguayan na mmeri merie Paraguay, nke rue taa alaghachighị n'ọnọdụ ya dị ka ike South America.
Phew, ka nnukwu akụkọ gasịrị ka ị ghọta ihe kpatara eji emefu ego Paraguay nke ukwuu ruo taa, anyị ga-aza ajụjụ isiokwu ahụ.
Ee, n'ihi Mgbanwe ahụ, ọ bara uru ịzụ ahịa na Ciudad Del Este. N’ezie, n’ebe a, m na-ekwu na obodo ahụ nwere ọtụtụ ngalaba nke ebe ịzụ ahịa dị iche iche n’ụwa ma bụrụkwa aha ọdịnala ịkpọ ụfọdụ ebe ịzụ ahịa nwere aha obodo ama ama. Yabụ, ị ga-ahụ Shoppingzụta Del Este, nke kacha nso n'ife ọbụbụenyi na Brazil. Enwekwara nzuko Madrid, Monzụ ahịa Monalisa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Atụmatụ ịzụ ahịa!
Jiri Shoppingzụ ahịa Del Este naanị maka mgbakwunye ọnụahịa
Ọzọkwa n'ime obodo ị nwere ike ịchọta ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa Shoppingzụta Del Este
Ciudad Del Este na-enwekarị tebụl ntụgharị ma na-anabata Dollar, Real, Peso Argentine na Guarani, nke bụ ego Paraguay. Ọ na-abụkarị mgbanwe mgbanwe mgbanwe n'etiti ego.
Na-elekọta ngwongwo gị mgbe niile, enwere ọtụtụ ndị na-ere n'okporo ámá na pọọpọ na mpaghara.
Ọ bụrụ n’ị ga-agafe Nnukwu Enyi Gị ka ịlaghachi, mee ya tupu elekere 16:00. N’oge a, ụlọ ahịa na-amalite imechi ọnụ ma na-ekpochi okporo ụzọ
Gbaa elektrọnik dị n'ime ụlọ ahịa ahụ oge niile tupu ịmalite imezu ya. Ọ bụghị omenala obodo ịnabata nloghachi. Onwere otutu akwukwo ana ere dika “uzo ozo” nke apughi aru oru. Kpachara anya ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ dị ala n'okpuru maka ọnụahịa maka ọnụahịa. (Nke mbụ 1).
Ọ dị mma, m nwere ike ikwu na mgbe m nọ ebe ahụ, m mere nnukwu nzụta igwe eletriki. Azụtara m igwefoto anaghị egbochi mmiri nke juputara na ndagwurugwu nke Foz do Iguaçu ma ree ya na-arụ ọrụ zuru oke. Azụrụ m ekwentị dị oke ọnụ ma dị ọnụ ala n’oge ahụ. O bu ihe nwute m ka m tufuru ya na Lisbon (nke mere na adighi m ka ebe ugbo elu.
Ndụmọdụ Ndụ odlọ
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa naanị, ọ ga-akwụ ụgwọ ịnwe na Ciudad Del Este. Mana ọ bụrụ n’ịga maka njem nlegharị anya, aro a ga-akwụ bụ ịnọ na Foz do Iguaçu (Brazil). Nke ahụ bụ ihe m mere na njem nke mbụ m, Anọgidere m na ụlọ mbikọ na Foz do Iguaçu. Nke a mere ka nlegharị anya na ọbụbụenyi dị n'etiti ndị mmadụ n'akụkụ ụwa niile. M zutere ma nyere onye Austrian, German, Argentine, Paraguayan aka. Ọ mara mma! Site n'ụzọ, Paraguay nwere asụsụ obodo abụọ. Guarani na Castilian. Mkparịta ụka anyị n'okporo ụzọ dị mma! Mgbe anyị nọ na abụọ, German, Castilian (Spanish), Portuguese amaala. Mgbe ọ ga-agwa onye ọ bụla okwu bụ Bekee, tụgharịrị n'asụsụ Castilian, dịka onye ndu anyị anaghị asụ Bekee.
Anyị nwedịrị foto gọọmentị guzobere.
Oleekwa ihe ọzọ ị ga-eleta?
Na mgbakwunye na Ciudad Del Este, ịnwere ike ịga:
-na Iguaçu Falls,
- nnụnụ ogige,
- Foz do Iguaçu (Brazil)
Ma ugbu a na ị maara ntakịrị banyere akụkọ ihe mere eme Paraguay na ụfọdụ ndụmọdụ ịzụ ahịa, m ga-akwụsị ebe a! Nnukwu mmakọ ruo oge ọzọ. (Debanye maka bọtịnụ uhie ebe ahụ.) 😎
Olee otú Ciudade Del Este Ịzụ ahịa Olee otú Paraguay